> Resource > Video > Home Video Editor: Sida loo Edit Home Video
Cayriin Gurigaaga video had iyo jeer u baahan doontaa sixiddiisa waxba kama sida qaali camera aad, ama sida xirfad aad u isticmaalaya. Haddii aad raadineyso weeyna editor guri video awood leh in lagu daro ah polish xirfad yar, Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) waa doorasho wanaagsan. Waa maammula fududahay in la isticmaalo iyo ka buuxaan muuqaalada waa in aad u qanciso baahidaada video tafatirka! Hadda raac tilmaan-hoose si aad u aragto sida ay u xaalkaa gurigaaga video.
1 dejinta faylka barnaamijka
Ka dib markii socda barnaamijkan, waxaad u baahan doontaa inaad soo dhoofsadaan gurigaaga video. Si fudud riix "Import", ka dibna dooran faylasha. Waxaad dajiyaan karaa wax kasta oo aad u isticmaali doonaa: files video, sawiro ama music. Markaas ka guurto gal tallaabada xigta.
2 Samee aad waqtiga
Hadda oo aad qabto wax walba laga keeno, waxaa la gaaray waqtigii ay u abuuraan aad waqtiga. Si fudud u jiidi oo hoos u clips u dhiganta kuwan raadkaygay iyo barnaamijka sii dayn doonaa inaad ku eegaan clip kasta si aad u aragto waxa ku yaal. Marka aad ku daraynaa in aad waqtiga, tani waa sida iyaga oo intaa ku daray in ay aad video. Waxaad jiidi-n-dhibic karaan si ay ula qabsadaan amarka clip kasta si ay u dhisaan video oo dhan.
3 Tafatir movie guriga
Video Editor Uu leeyahay wax walba oo aad u baahan tahay in aad xaalkaa movie guriga. Calanka u yar oo kor ku xusan waqtiga siiyaan qaar ka mid ah hawlaha aasaasiga ah tafatir sida beddesha, Split, Record Voiceover iyo in ka badan. Kaliya dooro waxa aad u baahan tahay sida aad u jecel yahay.
Oo ayan ku jirin qalabka tafatirka aasaasiga ah, waxaa kale oo jira hawlaha tafatirka sare inuu kaa caawiyo inaad la abuuro qaar ka mid ah sixir video tafatirka. Haddii video waa u baahan yar qabowdo, riix "Saamaynta" button. Markaasay aad wax xiiso leh qaar ka mid ah goobta oo kale ah taas oo u eg ah camera movie jir samayn karaa. Tijaabiyaan oo dhan saamaynta gaar ah ilaa aad la abuuro wax aad u jeclahay.
Iyadoo Video Editor, sidoo kale si fudud waxaad samayn kartaa a screen video multi. Si taas loo gaaro, jiididda-n-daadiyaa video clip kale in waqtiga PIP ah. Markaas si fudud u qabsato xajmiga iyo booska ama ku darto saamaynta dheeraad ah adigoo gujinaya "Advance". Waxaad ka eegi kartaa hagaha faahfaahsan oo ku saabsan saamaynta PIP this >>
4 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh, badbaadiyo ama la wadaagto aad videos
Haddii aad samaysay abuuraya aad masterpiece, ku eegaan wax oo dhan adigoo gujinaya icon play ah. Marka aad ku qanacsan tahay, ku dhacay "Abuur" oo aad arki doonaa fursado badan oo kala duwan, sida in aad computer ama qalab kala duwan oo lagu badbaadinayo aad filim, ku gubi gal DVD ama geliyaan si ay u YouTube. Dooro doorashada aad jeceshahay, oo aad samaysay!
Hadda download this editor movie guriga iyo shuqulladaada la dunida inteeda kale ay wadaagaan!